Rasaasa News – Xuska Maalinta Haweenka Adduunka March 8, 2012
on March 8, 2012 4:17 pm
Jijiga, Mar 8, 2012 [ras] – Maanta oo ah March 8, 2012 waa maalin aad ugu weyn haweenka aduunka oo loo aqoonsaday xuquuqdooda. Sanadkii 1911 oo haatan laga joogo boqol hal sano  ayaa ah kolkii ugu horaysay la aqoonsaday xuquuqdooda haweenka.Laakiin, waxaa dhab ah in ayna haweenka aduunku ayna wada helin xuquuq ee ay wali jiraan qaar dulman.
March 8, waxaa kale oo lagu xasuustaa in degaanka Somalida Ethiopia [Ogaden] March 8, 1978, ay ahayd maalintii Somaliya iyo Jabhadii WSLF laga saaray ka dib kolkii ay haysteen mudo 8 bilood ah July 5, 1977 – March 8 1978. Qodobkan oo aan ku soo qaadan doono qormo taariikheed oo gooni ah intaas ayaan ku dhaafaynaa.
Xaflado iyo Xusas lagu qiimaynayo 8 March, ayaa ka dhacaya dacalada aduunka kuwaas oo lagu waynaynayo maalinta haweenka aduunka, xalfaladahan oo laga soo jeedinayo hadalo aad u wanaagsan, laakiin aan runtii dhab ahayn, ayaa waxaa ka qayb galaya ururada haweenka iyo madaxda aduunka.
Dawlada deganka Somalida Ethiopia ayaa la filayaa in ay caawa ka samayso magaalada Jijiga xaflado lagu xusay maalinta haweenka. Ku simaha madaxweynah ahana madaxweyne ku xigeenka dawlada degaanka Somalida Ethiopia ayaa qoraal ka soo saaray maalinta haweenka.
Haweenka ku nool aduunka waxaa xuquuq dhab ah haysta kuwa ku nool dalalka hore umaray kaliya, kuwaas oo ka qayb qaata arimaha ay ka midka yihiin caafimaadka Haweenka, go,aamada qoyskooda, waxbarashada, shaqada iyo xuquuqda siyaasadeed.
Haweenka ku nool dunida 3aad iyo dunida 2aad midkoodna ma helaan waxa ay xaqa u leeyihiin, waxayna helin wax ugu yar xuquuq oo ah in ay ka qayb qaadataan go,aamada qoyskooda.
Xuquuq darida waxaa u dheer xad gudubyada joogtada ah sida dilka, kufsiga, guurka khasabka ah, googoynta jidhkooda iyo cabsida joogtada ah ee ay ku qabaan bulshada ay ku dhex nool yihiin.
Dalalka Afrika gabadhu inta ayna reer yeelan waxay ka cabsadaan oo dhibaato ku haya waalidka, walaalka labka ah iyo dhamaan eheladeeda labka ah oo haday wax ku maqlaan ama ay arkaan iyada oo joogta meel aan lagu ogayn garaaca.
Kolka ay guursato gabadhu waxay gashaa gacan labood kale oo cadaawa ah, kaas oo wax uu doonayo mooyee ayna wax kale gabadhu samayn karin, cabsidaas ayaa keenta in ayna waxyaabo badan waydiininba. Haweenayda ku nool dalalka Dunida saddexaad waxay had iyo goor joogtaa guriga hadii ay faraxsan tahay iyo hadii ay murugaysan tahayn cidi kama war gurto.
Marka ay dhawr ilmood dhasho waxaa laga yaabaa in uu la guursado, haweenka Afrika intooda badan kolka lala guursado way farxaan waayo waxay helaan fursad ay kula kulmi karaan dadka ama ay banaanka ugu bixi karaan.